MXF in Converter MP4: Sida loo Beddelaan MXF si fudud loo MP4
Sida loo Beddelaan MXF in MP4
MXF waa gaaban Waxyaabaha korto Qaabka, inta badan loo isticmaalaa in xirfadle kaamirada digital sida Sony XDCAM, Panasonic HVX200, Canon XF305 / XF300 / XF100 iwm in uu kaydiyo video, audio iyo xogta barnaamijkii. Files MXF waa ku adag tahay dadka isticmaala si ay u ciyaaro ciyaaryahan warbaahinta badan ama qalabka, iyo sidoo kale adag tahay in la saxaa in qaar ka mid ah software video tafatirka ee aasaasiga ah sida Windows Kan sameeyey Movie iyo iMovie iwm Si kastaba ha ahaatee, files edit MXF dheeraad ah oo aad si fudud u ciyaari karo iyo diinta qaab MXF in oo ah qaabab kale oo caan ah. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad ka ciyaari files MXF on Galaxy, Blackberry, Zune, iPhone, iPad, iPod, iwm, waxaad u bedeli karaan MXF in MP4 dadka isticmaala.
Maqaalkani waxa uu inta badan diiradda ku saabsan sida loo badalo MXF files footage in MP4 u ciyaaro files MXF sii ballaadhan. Si aad u samayn, aad leedahay si aad u hesho xirfad MXF ah in Converter MP4. Halkan, Wondershare Video Converter waa xoog leh lagula taliyey. Waxa kaliya ma ahan kaa caawin kara inaad bedesho files MXF si aad u files MP4 fudayd, laakiin sidoo kale waxa uu awood u leeyahay inuu ciyaaro aad ha files MXF kasta oo warbaahinta MP4 ciyaaryahanka caanka ah ama qalab la video tayada asalka ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in kaliya ay doortaan presetting ee filaayo in aad ciyaaryahan ama qalab.
Next, waxaan soo qaadan doonaa MXF in ay diinta ka MP4 tusaale ahaan in aad u muujiso in ay taasi app weyn ka shaqeeya. Ka dib markii diinta, waxaad mar walba iyo meel kasta oo ka ciyaari kara faylasha MXF aad.
1 Import MXF videos in MXF in ay Converter MP4
Burcad MXF si MP4 video Converter, in ay "Add Files" button aad dhaqaajiso mouse, ka dibna u riix. Suuqa kala pop-up A ku hoggaamin doonaa si aad u ogaato faylasha MXF deegaanka, socda, kaliya iyaga ku shuban in ay leeg- tahay tan app ee. Si kale oo aad ku dari kartaa files WTV waa in ay helaan files kuwaas oo diirada ku PC ka dibna iyaga jiidin app this.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo badan files MXF galay mid ka mid file, xilligan la joogo, kaliya aad qabsato, kuwaas oo files ku daray sida ay si ciyaarta, ka dibna awood "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" ikhtiyaarka ugu hooseysa.
2 Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka
Mouse ka, si ay "Qaabka Output" Murayaad ee suuqa kala barnaamijka, halkaas oo aad u baahan tahay in guji qaab image icon ama hoos-hoos liiska qaab dhaqaaq. In ka dib markii suuqa kala qaab wax soo saarka, waxaad dooran kartaa MP4 ka "Qaabka" category> "Video" subcategory.
Fiiro gaar ah: (Ikhtiyaar) Ugu salka "Output Qaabka" Murayaad, waxaad riixi kartaa "Settings" doorasho si ay u dejiyaan encoder, heerka jir, xallinta, bitrates, iwm
Haddii aad beddelid files MXF in MP4 kaliya loo maqli karo qalabka sida iPhone, iPad, Apple TV, iwm aad, aad si fiican u xulan lahaa qaababkan soo saarka si toos ah-filaayo, for files wax soo saarka iyaga ku haboon ugu fiican.
3 Habee video files (Ikhtiyaar)
Haddii aad si fudud u riix "Edit" in bar menu, inaad leedahay doorashooyinkan si ay u jar, dalagga, saamayn, ku dar watermark iyo Cinwaan iwm
4 Start MXF in ay diinta ka MP4
Saxaafadda "Beddelaan" button in MXF bilaabaan in ay diinta ka MP4 video. Tani waxay bar horumarka cagaaran idin tusin xawaaraha qaab beddelidda. Waxaad ka heli doontaa app this aad si deg deg ah ku dhameysan kartaa converson ah.
Ka dib markii diinta, ka heli files wax soo saarka sida Jidka ay wax soo saarka ama ay si toos ah ugu riixaya doorasho Open Folder. Hadda, waxay leeyihiin oo kaliya madadaalo ah! (Fiiro Gaar ah: Wixii qalabka, aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan files si ay qalabka.)
Sida loo Beddelaan MXF in MOV (QuickTime) si fudud oo dhaqso
Sida loo Beddelaan MXF in AVI si fudud oo dhaqso
Sida loo Beddelaan Canon MTS M2TS Files in qaab kasta oo si fudud oo dhaqso
Top Toban 4K Video Downloader lagu bedelan karo
Sidee loo Diiwaan Computer Screen iyo geliyaan si ay u YouTube
Hel DVD Creator ah Great aan Watermark
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MXF in MP4